सिल्ल्टले छवि एक्सटेक्शन उपकरणको5संस्करणहरूको सुझाव दिन्छ
छवि निष्कर्षण उपकरणले नामित वेबसाइटमा फेला परेको छविहरूको सूचीहरू सिर्जना गर्दछ।. तपाईं चित्रहरू निकाल्न र JSON ढाँचामा निर्यात गर्न यो उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. यो उपकरणको प्रयोगकर्ताको अनुकूल इन्टरफेस छ र सजिलो प्रयोग हो - whois site br. तपाईंले भर्खरै वेबसाइटको यूआरएल प्रविष्ट गर्नु भएको छ जुन तपाईं विश्लेषण गर्न चाहानुहुन्छ र "पेश गर्नुहोस्" बटनमा हिट गर्न चाहानुहुन्छ. तस्विर निकासी उपकरणले तुरुन्त सामग्री पुन: प्राप्त गर्दछ र तपाइँलाई चाहेको परिणाम प्राप्त गर्दछ. यसको केही हालका संस्करणहरू तल उल्लेख गरिएका छन्.
1. निकालें पीडीएफ:
निकाल्नुहोस् पीडीएफ PDF कागजातहरू स्क्रैप गर्न र तिनीहरूलाई व्यक्तिगत खण्डहरूमा तोड्न मद्दत गर्दछ: छवि, पाठ, फन्टहरू, र मेटाडाटा. तपाईंले गुणवत्तामा सम्झौता नगरी तपाईं धेरै वेबसाइटहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले भर्खरै URL सम्मिलित गर्न र निकाल्न अनुमति दिनुहोस् PDF लाई यसको डेटा स्क्रैप गर्नुहोस्
कन्भरटर अर्को ठूलो छवि निकाय हो जुन तपाईंको तस्बिरहरू र शब्द कागजातहरू सजिलै संग स्क्रैप गर्दछ।. यो उपकरण उद्यम र व्यवसायीहरूको लागि राम्रो छ. तपाइँ यो उपकरण प्रयोग गरी BMP, GIF, JPG र PNG फाइलहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं केवल डेटा हाइलाइट गर्न र स्क्रैपिंग सुरु गर्न "निकाल्नुहोस्" बटन थिच्नु पर्छ. जब कन्भरटर स्क्रैपिंगको साथ गरिन्छ, तपाईं डाटा वांछनीय ढाँचामा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ.
सानो पीडीएफ छवि छवि निष्कर्षण उपकरण को एक अन्य संस्करण हो. यसको प्रयोगकर्ताको अनुकूल इन्टरफेस छ र तपाईले चाहानुहुने धेरै छविहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ. SmallPDF ले केवल JPG र PNG फाइलहरू स्क्रैप गर्दछ तर PDF कागजातहरूको डेटा पनि निकाल्छ. तपाईं डेटा पठाउन योग्य र स्केलेबल ढाँचामा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र इन्टरनेटमा अधिक सुरू गर्न सक्नुहुन्छ. जब तपाइँ URL सम्मिलित गर्नुहोला वा छवि अपलोड गर्नुहुन्छ, तपाईले "स्क्रैप" बटनमा क्लिक गर्नु पर्छ र यो उपकरणलाई कार्य गर्दछ।.
4. पीडीएफ अनलाइन:
पीडीएफ अनलाइन छवि निष्कर्षण उपकरण को सबै भन्दा राम्रो संस्करणहरु मध्ये एक हो. यसले तपाईँलाई उच्च गुणस्तरको छविहरू प्राप्त गर्दछ र सजिलै संग ठूलो वेब पृष्ठहरू स्क्रैप गर्दछ. केवल खरिद भनेको यो उपकरण एक समय मा तीन छविहरु लाई स्क्रैप गर्न सक्दछ. यसको मतलब तपाईं बल्क परियोजनाहरूको लागि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न र यसको प्रीमियम संस्करण किन्न हुनेछ. पीडीएफ अनलाइन डाउनलोड गर्न आवश्यक छैन र तपाईंको डेटा निष्कर्षण कार्यहरू अनलाइन ह्यान्डल गर्न सक्दछ. यो एक व्यापक र विश्वसनीय प्रोग्राम हो, व्यापार, प्रोग्रामर, कोडक, आईटी विशेषज्ञहरु र वेबमास्टर्सका लागि उपयुक्त छ.
PDFMate अझै छवि निकासी उपकरण को एक शानदार संस्करण हो. यो हाल केवल विन्डोज प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपलब्ध छ र यसको प्रयोगकर्ताको अनुकूल इन्टरफेसको लागि उत्तम छ. PDF मार्फत, तपाईं धेरै तस्बिरहरू वा पीडीएफ फाईलहरू चाहानु सक्नु भएको रूपमा स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ. यो उपकरणले पहेंलो पृष्ठहरू, सेतो पेजहरू, छलफल फोरमहरू र अनलाइन डाइरेक्टरीहरूबाट डेटा पनि स्क्रैप गर्दछ. यो PNG र JPG दुवै फाइलहरू स्क्रैप गर्दछ र विश्वसनीय सफ्टवेयर हो.
उचित खोजी इञ्जिन अप्टिमाइजेसनको लागि, सबै तस्बिरहरू ALT गुणहरू नामकरण गर्नु पर्छ. विशेषताहरु गुगल लाई तपाईंको तस्वीरहरु को बारे मा सूचित गर्दछ र तपाईंलाई प्रकाशित गर्दै छन् कि किस प्रकार को एक विचार दिनुहोस. चित्र निकासी उपकरण को उपरोक्त संस्करणहरु विश्वसनीय र सही दुवै हो. उनीहरूले हामीलाई चाहेको परिणाम दिन्छन् र कुनै पनि कोडको आवश्यकता छैन. तपाइँ यी छवि निष्कर्षण सफ्टवेयरबाट गैर-प्रोग्रामरबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ.